उँखुको जुस खानुका १० फाइदा –
स्वास्थ्य | By admin
गर्मी मौषममा मानिसहरु उँखुको जुस गर्मी हटाउनको लागि पिउने गर्छन् । तर यो स्वादिष्ट पेय पदार्थले गर्मी हटाउन मात्र होइन अन्य थुप्रै फाइदा छन् भन्नेबारे चाँहि धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । उँखुको जुसमा क्याल्सियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, म्याग्नेसियम, फस्पोरस, पोटासियम एवं जिंक जस्ता खनिज हुन्छ ।
यस्ता छन् जुसका फाइदा :
१. तत्काल उर्जाः उँखुको जुसमा उच्च मात्रामा ग्लुकोज हुन्छ जुन् शरीरलाई हरपल आवश्यक पर्छ । उँखुको जुस खाँदा तत्काल शरीर उर्जाशील हुन्छ ।
२. क्यान्सरबाट बचाउँछः उँखुको रसमा क्याल्सियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, म्याग्नेसियम, फस्पोरस, पोटासियम एवं जिंक जस्ता खनिज हुन्छ । यि तत्वले प्रोस्टेट र स्तन क्यान्सरबाट बचाउँछ ।
३. डण्डीफोरबाट मुक्तिः उँखुको रसबाट छालालाई आवश्यक पर्ने अल्फा हाइड्राक्सी एसिड प्रयाप्त हुन्छ । जसले छालामा आउने डण्डीफोर लगायतका समस्याबाट मुक्ति मिल्छ ।
४. मृगौलालाई फाइदाः उँखुको रसमा प्रशस्सत प्रोटिन हुन्छ । यसलाई नरिवलको पानीमा मिलाएर पिउँदा युरिन इन्फेक्सन् एसिडिटी वा पत्थरी लगायतका समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
५.रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ्छः उँखुको रसमा एंटीऑक्सीडेंट्सको मात्रा उच्च हुन्छ जसले शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धी हुन्छ ।
६.पाचन प्रणालीमा सुधारःउँखुको रसमा हुने पोटासियमले पाँचन प्रणाली पनि राम्रो हुन्छ ।
७.दाँत बलियो हुन्छःउँखुको रसमा खनिजको मात्रा उच्च हुन्छ जसले हाड र दाँत बलियो बनाउँछ । यसले दाँतलाई चम्किलो बनाइदिन्छ ।
८.नङमा चमकः उँखुको रसको सेवनले नङलाई पनि सुन्दर बनाउँछ । यसले नङमा हुने दाग धब्बा हटाउन सघाउँछ ।
९.त्वचा जवान हुन्छः उँखुको रसमा हुने खनिजको मात्राले शरीरमा उर्जा कायम राख्छ र यसले छालालाई जवान देखाउन पनि सहयोग गर्छ । उँखुको रसले छालामा आवश्यक पर्ने नुनको मात्रा कायम राख्ने हुँदा छाला जवान हुन्छ ।
१०.ज्वरोबाट मुक्तिःउँखुको रसमा प्रोटिनको मात्रा उच्च हुन्छ । यसले प्रोटिनको कमीबाट आउने ज्वरोबाट पनि बचाउँछ ।